Heerarka qalin-jabinta ee Stillwater ayaa wali xoogan | Faahfaahinta Wararka Degmada - Dugsiyada Dadweynaha ee Harta Biyaha ee ISD 834
Juun 10 , 2021
Xitaa inta lagu gudajiray Cudurka faafa ee COVID-19, ardaydu waxay sii wadeen kaqalinjabinta Dugsiyada Dadweynaha ee Stillwater tiro aad ufarabadan. Marka loo eego xogta ay soo saartay Waaxda Waxbarashada ee Minnesota, Dugsiga Sare ee Stillwater Area wuxuu lahaa heerka qalin-jabinta ee 96.6% sannadka 2020 - halkii uu sanadkii hore ka ahaa 95.8%. Guud ahaan 644 arday ayaa ka qalin jabisay Dugsiga Sare ee Stillwater Area sanadkii hore.
Guud ahaan heerka qalin-jabinta degmada ee 2020 wuxuu ahaa 93.5%, oo ay kujiraan ardayda dhigata Xarunta Waxbarshada ee agagaarka St.
Ardayda aagga Stillwater ayaa sii wadaya inay ku qalin jabiyaan heer ka sarreeya dhiggooda gobolka oo dhan. Celceliska gobolka ee 2020 wuxuu ahaa 83.8%.
Waxbadan ka baro heerka qalin-jabinta Stillwater adoo booqanaya Kaarka Warbixinta ee Waaxda Waxbarashada ee Minnesota .